အက်ဆစ် Reflux ဆက်ဆံရန်ကဘယ်လို | ရင်ပူကယ်ဆယ်ရေး Find
အက်ဆစ် reflux နာကျင်နှင့်စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအက်ဆစ် reflux အနေဖြင့်ဆင်းရဲခံရလျှင်, သငျသညျအဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သောရင်ပူကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်. လည်ချောင်း၌ဤမီးလောင်သောနာကျင်မှုဘဝကိုခက်ခဲစေနိုင်သည်, သငျသညျအိပျပျြောဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. ကံကောင်းတာက, အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်. ဒီအခွအေနေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ရက်နေ့တွင် Read, အဖြစ်အက်ဆစ် reflux ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လို.
ဒါကြောင့်, အဘယ်အရာကိုအကြောင်းတရားများ အက်ဆစ် reflux? အစာအိမ်အတိုအဘို့အနိမ့် esophageal sphincter သို့မဟုတ် Les ကိုခေါ်တံခါးနားမှာကြွက်သားတစ်လက်စွပ်ရှိပါတယ်. ဒီအဆို့ရှင်အစားအစာအစာအိမ်ဝင်ခွင့်ပြုပါရန်လည်းမရှိပြန်ထဲကအစာပြွန်မှတဆင့်၎င်း၏လမ်းအောင်ထံမှအစာအိမ်အက်ဆစ်သို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်ကာကွယ်ပေးသည်. အခါ Les အမှား, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပွင့်လင်းကျန်ရှိသောဖြင့်သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအချိန်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း, အက်ဆစ် reflux ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်. အစာအိမ်အက်ဆစ်ပြန်အစာပြွန်တက်င်း၏လမ်းကို, မီးလောင်သောအာရုံဖန်တီးခြင်းနှင့်အလားအလာကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်ရှိနေသေးလျှင်တစ်ရှူးမထိခိုက်စေ.
အက်ဆစ် reflux အဘို့အအကြောင်းတရားများကွဲပြားခြားနား. တခါတလေ, ဒါဟာသိပ်အစာစားခြင်းသို့မဟုတ်အစာစားပြီးနောက်ချတင်သောကဲ့သို့ရိုးရှင်း. ဒါက Les ကြွက်သားအပေါ်ဖိအားပေးနှင့်ပွင့်လင်းသူကအတင်းနိုင်ပါတယ်. အခြို့သောအစားအစာများနှင့်အဖျော်ယမကာ, စပ်အစားအစာများနဲ့တူ, အရက်, ဆိုဒါ, နှင့်ကော်ဖီသည်လည်းအက်ဆစ် reflux ပိုပြီးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. နဲ့ Ibuprofen ကဲ့သို့အဆေးဝါးများ, အက်စ်ပရင်ဆေးပြား, သို့မဟုတ်ကြွက်သားအပန်းဖြေလည်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်.
သငျသညျနာတာရှည်အက်ဆစ် reflux ရှိပါက, အကြောင်းရင်းလေ့တစ် hiatal အူကျလို့ချေါတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါသည်. ပုံမှန်အားဖြင့်, အဆိုပါမြှေး, အသက်ရှူနှင့်အတူကူညီပေးသည်သောကြွက်သားအရာဖြစ်ပါသည်, အစာအိမ်အပေါ်နှိမ့်ချတိုက်တွန်းနှင့် Les တံခါးပိတ်ထားရန်ကူညီပေးသည်. အဆိုပါ Les ်အစာအိမ်၏အထက်ပိုင်းသောအဘို့ကို၎င်းမြှေးအထက်ပြောင်းရွှေ့လျှင်, ဒီ hiatal အူကျဟုချေါသညျ. အဆိုပါအစာပြွန်တက် Hiatal အူစာနယ်ဇင်းအစာအိမ်အက်ဆစ်, အက်ဆစ် reflux တစ်နာတာရှည်ဗားရှင်းဖြစ်စေတဲ့. သင်မှန်မှန်အက်ဆစ် reflux ရှိပါက, သင်တစ်ဦး hiatal အူခံစားနေရပြီးစေခြင်းငှါလျှင်ကြည့်ဖို့ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်.
ဒါကြောင့်, တစ်ဦး hiatal အူပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါလျှင်အက်ဆစ် reflux ရောဂါကုသရန်ဖို့ဘယ်လို? အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း Les ကြွက်သားအပေါ်အလွန်အကျွံ strain ချပြီးရှောင်ရှားရန်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အထကိုပြောင်းလဲရိုးရှင်းစွာဖြစ်ပါသည်. တခါမှာလျော့နည်းအစားအစာစားသုံးခြင်းအလွယ်ကူဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်. သင့်ရဲ့အစာအိမ်အတွက်ပိုပြီးအစားအစာ, အဆိုပါ Les ကြွက်သားပိတ်ထားနေဖို့များအတွက်ခက်ခဲသည်. သေးငယ်, ပိုပြီးမကြာခဏအစားအစာများကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, အိပ်ရာသွား၏နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာအရက်အစာစားခြင်းသို့မဟုတ်သောက်သုံးရှောင်ရှားရန်ကြိုးစား, နှင့်အနည်းငယ်ယိမ်းယိုင်အပေါ်အိပ်ရန်သင့်အိပ်ရာ၏ဦးခေါင်းကိုအနည်းငယ်လက်မပြုစုပျိုးထောင်ကြိုးစားကြ. နှိမ့်ချတင်သောအခါ, အများစုမှာအက်ဆစ် reflux ဖြစ်ပေါ်, ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကာလအတွင်း Les အပေါ်ဖိအားကိုလျှော့ချအရေးကြီးပါတယ်. သငျသညျအဝလွန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အလေးချိန်ဆုံးရှုံးလည်းအက်ဆစ် reflux လက္ခဏာတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
အက်ဆစ် reflux တစ်ဦးနှောင့်အယှက်အခြေအနေဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်စီမံခန့်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်. အများစုမှာအက်ဆစ် reflux အလွန်အကျွံစားခြင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝအစာအိမ်နှင့်အတူဆင်းကိုတင်သောကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်. အက်ဆစ် reflux ဆက်ရှိနေသေးသို့မဟုတ်နာတာရှည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဖြေရှင်းချက်အဘို့သင့်ဆရာဝန်ကိုတွေ့မြင်သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦး hiatal အူခံစားနေရပြီးစေခြင်းငှါရှိမရှိရှာဖွေ.
Acid Reflux နှင့်အတူရောဂါလက္ခဏာကင်းဝေးအောင်ဘယ်လို